निजी स्कुलहरुमा ब्रम्हलुट, मारवाडी मालिक बनेपछि बृहस्पतिमा उत्पात !
काठमाडौं, ३ बैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७४ चैत २९ मा चितवनको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भाषण गरे । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुपर्ने कुरा झिनो स्वरमा भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
तर, व्यवहारमा त्यसविपरीत निजी स्कुलको पक्षपोषण गर्ने काम शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेका छन् । भाषणमा शिक्षाको पहुँच सबैमा हुनुपर्ने कुरा गर्ने व्यवहारमा निजी स्कुलको हितमा काम गर्ने दोहोरो चरित्र शिक्षामन्त्री र उनको पार्टीको देखिएको छ ।
१० वर्षे जनयुद्धमा बोर्डिङ स्कुल खारेज गरी सबैलाई एकै खालको शिक्षा दिने नीति लागु गर्ने भनेर जनता आकर्षित गरेको माओवादी केन्द्र अहिले निजी शैक्षिक माफियाको पक्षपोषणमा केन्द्रित छ । शिक्षा ऐन, नियमावलीलाई चुनौती दिँदै निजी स्कुलहरुले मनोमानी तवरले शुल्क बढाएका छन् । माओवादी केन्द्रकै नेता पोखरेल शिक्षामन्त्री छन् ।
तर, निजी स्कुलहरुले यही वर्ष विगतमा भन्दा पनि अचाक्ली शुल्कबृद्धि गरेका छन् । एक कक्षामा भर्ना शुल्क मात्र युल्नेस, रातोबंगला, प्रिमियर, पाठशाला, जेम्स, एलआरआई, चाँदबाग जस्ता स्कुलमा १ कक्षामा बच्चा पढाउन वर्षमा कम्तीमा १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्छ ।
सरकारले तोकेको मजदूरको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय हो । सरकारले तोकेको तलबले एउटा मजदूरको तलबले उसको एक सन्तानलाई पढाउन पनि पुग्दैन । यस्तो लुट मच्चाउन सरकारले बोर्डिङहरुलाई किन छुट दिइरहेको छ ?
अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्–सरकारको स्वीकृतिबेगर पैसा उठाउनु गैरकानुनी हो । निजी स्कुलहरुले सरकारको स्वीकृतिबेगर नै मनपरी शुल्क उठाएर बेथितीको पराकाष्टा नै देखाएका छन् । सरकार वा माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय निकायले २०७५ सालको लागि निजी स्कुलहरुको स्कुल तोकेको छैन ।
भण्डारीले भने–निजी स्कुलले मनोमानी ढंगले शुल्क लिनुमा सरकारकै कमजोरी हो । उसले नियमन गर्न नसक्नुको परिणाम हो । सरकारको स्वीकृतिबेगर उठाएको शुल्क फिर्ता गर्नसक्नुपर्छ । अनिमात्र सरकार भएको महसुस हुन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका ‘क’ वर्गका स्कुलका लागि २०७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क प्राथमिक तहका लागि २ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ, निम्त माध्यमिक तहका २ हजार ७ सय, माध्यमिक तहका लागि ३ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।
‘ग’ वर्गका स्कुलहरुका लागि २०७४ मा प्राथमिक तहमा १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ, निम्त माध्यमिकमा १ हजार ८ सय र माध्यमिकमा २ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो । ‘ग’ वर्गको ५० प्रतिशत बढी ‘क’ वर्गका स्कुलले लिन पाउँछन् ।
२०७४ मा सरकारले तोकेको त्यो शुकुनै पनि स्कुलले लागू नगरे पनि सरकारले केही कारबाही गर्नसकेन । २०७५ मा सरकारले शुल्क तोकेकै छैन । दुई तिहाई अभिभावकको भेला गरी जति पनि शुल्क लिन पाउने भन्ने कुरामा टेकेर युलनेस, रातोबंगला जस्ता स्कुलले मनपरी शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
दुई तिहाई अभिभावकहरुको भेलाको नाममा मनपरी शुल्क उठाउन छुट छैन, अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले भने, २ महिना बराबरको मासिक शुल्क बराबर मात्र भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, ६ महिनाको शुल्क भन्दा बढी भर्ना शुल्क बोर्डिङ स्कुलहरुले अभिभावकहरुबाट असुली गर्दै आएका छन् ।
ब्रम्हलुटमा नेताका स्कुल
निजी स्कुलहरुको ब्रम्हलुट रोक्न सरकार असफल हुनुको कारण हरेक पार्टीका नेताहरुले तिनका आफन्तहरुको नाममा स्कुल चलाएका कारण पनि हो । युलनेस स्कुल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती डा.आरजु देउवाको हो । प्रिमियर स्कुल एमालेका नेता सुवास नेम्वाङकी भान्जीको हो ।
रातोबंगला स्कुल कनकमणि दीक्षितको हो । यी दुई प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्, हरेक महंगा बोर्डिङ स्कुल नेता वा तिनका आफन्तका छन् । जुन स्कुलले जे जति अभिभावक ठगी गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने गुनासो छ ।
आरजु संचालक रहेको युलनेस स्कुलको भर्ना शुल्क नै रु. एक लाख ५० हजार छ । रातोबंगलाको भर्ना शुल्क रु.एक लाख ७ सय छ । ग्यालेक्सीको भर्ना शुल्क ५९ हजार ४५ छ । यी तीन प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यसरी सरकारको स्वीकृतिबिना भर्ना शुल्क लिने छुट दिइएको छ ।
शिक्षा ऐन नियमलाई खुलेआम चुनौती दिने यस्ता स्कुलले भर्नाको फर्म बिक्री देखि धरौटीबापत लिएको रकम फिर्ता गरेको कुरा समेत आएको छ । वर्षैपिच्छे मनोमानी शुल्क बढाउने निजी स्कुल लगामविनाका घोडाजस्ता भएका छन् ।
मारवाडी मालिक बनेपछि बृहस्पति स्कुलमा लुटतन्त्र
बाल संगठनको नक्सालस्थित जग्गा लिजमा लिएर संचालन हुँदै आएको बृहस्पति विद्यासदन विशाल ग्रुपले लिएको छ । विशाल ग्रुपले लिनासाथ त्यो स्कुलको परिसरमा उसको कार्यालयहरु राख्न थालेको छ । स्कुलमा भारतीय नागरिक सिद्धार्थ केडिया र अभिनव सिंहानियाले हिन्दीमा नेपाली कर्मचारी र शिक्षकलाई गालीगलौज गरेपछि कतिपयले छाडिसकेका छन् ।
यसअघिका संचालक पुरुषोत्तमराज जोशीले उक्त स्कुल विशाल ग्रुपलाई १ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि कागजमा ३० करोड रुपैयाँमात्र दिएर करछली गरेको आरोप लागेको छ । उक्त स्कुलले कसरी अभिभावक ठग्छ, राज्यलाई कसरी कर छली गर्दैआएको छ, त्यसको विवरण प्राप्त भएको छ ।
बृहस्पति विद्यासदनले विभिन्न शीर्षकमा ऐन–नियमविपरीत शुल्क लिने गरेको छ । अभिभावकहरुले यसरी मनपरी शुल्क नबढाउन आग्रह गर्दा उल्टै सिद्धार्थ केडियाको निर्देशनमा प्रशासन निर्देशक कुमार थापाले धम्की दिने गरेका छन् । थापाले शुल्क बढाउने निर्णयमा पुनर्विचार हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
र, केही अभिभावकलाई उनीहरुका सन्तानको शुल्क छुट दिएर विभाजन ल्याउने कामा विशाल ग्रुप लागेको छ । बृहस्पति स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर उक्त स्कुलले कर समेत छलेको छ । एक विद्यार्थी बराबर १६ हजार मासिक शुल्क लिने बृहस्पति स्कुलले कर भने २ हजार ३ सय रुपैयाँ मासिक शुल्कको मात्र तिर्ने गरेको छ ।
यसरी विभिन्न शीर्षकमा यो वर्ष पनि अत्यधिक शुल्क बढाएपछि अभिभावकहरु दैनिकजसो शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै स्कुलमा भेला हुन थालेका छन् ।
२०७४ चैत २८ मा स्कुलमा भेला भएका अभिभावकहरुलाई बृहस्पति विद्यासदनका प्रशासन थापाले शुल्कवृद्धि फिर्ता हुँदै नुहने अर्को वर्ष थप बद्धि हुनसक्छ, मानसिक रुपमा तयार हुनुस्, नसक्नेहरु बच्चा झिकेर लैजानुस् भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
थापाले स्कुल भएको जग्गा सरकारी भए पनि हामीले लिजमा लिएका हौं, सरकारले केही गर्नसक्दैन भन्दै चुनौती नै दिएका थिए । बृहस्पति विद्यासदनले रजिष्ट्रेसन फी वन्ली फर न्यू भनेर नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म २० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको भर्ना नभनेर रजिष्ट्रेसन भनेर लिइएको छ । २०७२ सम्म एनुअल फ ीभनेर ३ किस्तामा तिर्नुपथ्र्यो । अभिभावकले कक्षा २ को विद्यार्थीका लागि मासिक ४८ सयका दरले ३ महिनामा १४ हजार ४ सय तिर्नुपथ्र्यो ।
त्यो एनुअल शुल्क बृहस्पति स्कुलले १४ हजार ४ सयबाट बृद्धि गरी २०७३ देखि तीन महिनामा २० हजार १ सय ९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी बृद्धि गर्यो । एक किस्तामा ६ हजार ७ सय ३३ बुझाउन अभिभावक बाध्य भए । करिब ६ हजार एनुअल शुल्क बृद्धि गर्यो ।
२०७४ मा त्यो एनुअल शुल्क मासिक शुल्कमा गाभियो । एक विद्यार्थीबराबर यातायात र खनासहित ९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । यसरी ४ कक्षाको शुल्क १२ हजार ३ सय ४३ बनायो । ६ कक्षादेखि माथिल्ला कक्षामा त्यो भन्दा झन् धेरै बढाइयो ।
२०७३ मा एनुअल शुल्क गाभेको बृहस्पति स्कुलले पुनः २०७५ मा पुराना अभिभावकहरुलाई पुनः सो शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ । पुरानालाई ४६ सय रुपैयाँ र नयाँलाई २० हजार तिर्नुपर्ने निर्णय स्कुलले २०७५ बाट फेरि लादेपछि अभिभावकहरु रुष्ट भएर दैनिक भेला हुन थालेका छन् ।
बृहस्पतिले २०७३ मा गाभेको एनुअल शुल्क फेरि २०७५ बाट लिन सुरु गरेको छ । अभिभावकले २०७५ बाट नर्सरीदेखि १० कक्षासम्म एनुअल भनेर २० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । यसरी बृहस्पति स्कुलमा अध्ययन गर्ने नसरी र केजीको बच्चाको १३ हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
१ कक्षादेखि ५ सम्मको १३ हजार ५ सुय रुपैयाँ, ६ देखि ८ कक्षासम्मको १५ हजार २ सय र ९ र १० कक्षाको १६ हजार ३ सय उक्त स्कुलले मासिक रुपमा तिर्नुपर्ने भएको छ । बृहस्पति स्कुलमा खाना अनिवार्य गरेको छ । खाना अनिवार्य गर्न शिक्षा ऐन नियम अनुसार पाइँदै ।
जसरी स्कुलभित्र पोशाक र किताब बिक्री गर्न पाइँदैन, त्यसैगरी खाना पनि अनिवार्य गर्न पाइँदैन । बृहस्पतिले खाना अनिवार्य गरेको छ । एक छाक खानाको नर्सरीदेखि ५ कक्षासम्मको ७ हजार लिने गरेको छ । ८ देखि १० कक्षासम्मको ७ हजार लिने गरेको छ ।
१३ सय विद्यार्थी र कर्मचारीका लागि दैनिक खाना खुवाउन एक जनाबराबर बढीमा ३५ सयदेखि ४ हजार लागत पर्न आउँछ । एउटा क्याटरिङले वर्षमा १०–१५ वटा पार्टी गरेर कर्मचारी पाल्नेदेखि मुनाफा गर्छ भने बृहस्पति स्कुलले क्याटरिङ गरेर दैनिक लाखौं र वर्षमा करोडौं करोडौं मुनाफा लिइरहेको छ ।
यसमा एक रुपैयाँ कर समेत तिर्दैन । १३ सय विद्यार्थीको मासिक ९१ लख रुपैयाँ खानाबापत मात्र बृहस्पति स्कुलले लिने गरेको छ, साँघुमा उल्लेख छ ।
वार्षिक १० करोड ९२ लाखको मूल्य अभिवृद्धिकर १ करोड ४१ लख ९६ हजार हुन आउँछ । यसरी बार्षिक रुपमा डेढ करोडका दरले खानामा मात्रै बृहस्पति स्कुलले करछली गरेको देखिन्छ । स्कुलले यसरी छली गरेको करबारे आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धन विभागको ध्यान कहिले जान्छ ?
ह्याप्सले गर्यो ३० हजार नगत सहित शैक्षिक सामग्री वितरण
शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाइन्छ ः मुख्यमन्त्री राई
हिरक महोत्सव सम्पन्न ः झण्डै सवा १ करोड आर्थिक संकलन ।।